काठमाडौँ । बाहिरी चक्रपथ निर्माणको चर्चा चलेको एक दशकपछि उपत्यकाका तीनै जिल्ला जोडिने ७३ किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माणको काम अघि बढेको छ ।
चक्रपथ निर्माणको पहिलो चरणमा चोभार–गाम्चा–सतुंगल ६.६ किमी दूरीको ३.५ वर्ग किमी जग्गा विकास गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान शहरी विकास मन्त्री दिलनाथ गिरीले यसै साता निर्णय गरेका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले गतवर्ष चोभार–गाम्चा–सतुंगल ६.६ किमी दूरीको ३.५ वर्ग किमी जग्गा विकास गरी बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न ठोस निर्णय गरेको थियो । जग्गा विकासका लागि त्यस क्षेत्रका जग्गाधनीको असहमति भए ३५ दिनभित्र उजुरी दर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यसमा ९६ जनाले उजुरी दर्ता गरेका थिए ।
“चोभार–गाम्चा–सतुंगल ६.६ किमी दूरीको ३.५ वर्ग किमी क्षेत्रमा अनुमानित सात हजार व्यक्तिको जग्गा छ, यसको ५१ प्रतिशतले असहमति जनाएका भए बाहिरी चक्रपथको काम रोकिन्थ्यो, धेरैको सहमति भएकाले बाहिरी चक्रपथको काम शुरु भएको हो”–उनले भने ।
बाहिरी चक्रपथको सडक ५० मिटरको हुनेछ । राजमार्ग जस्तै केन्द्रबाट दुवैतिर २५÷२५ मिटर जग्गा लिएर चक्रपथ बनाइने प्राधिकरणले जनाएको छ । सडकका लागि प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहण गर्दैन । नमिलेको जग्गालाई योजनाबद्ध रुपमा विकास गरी समुदायलाई हस्तान्तरण गर्छ ।
जग्गा विकास गरिदिएबापत जग्गाधनीले बाहिरी चक्रपथ र जग्गा विकास गरिने ३.५ वर्ग किमी क्षेत्रमा छ, आठ र ११ मिटरका अन्य तीन सहायक सडक निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको योगदान गनुपर्ने उनले बताए ।
सूचनामा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएपछि छिटो गरी बाहिरी चक्रपथको चोभार–गाम्चा–सतुङ्गल ६.६ किमी निर्माण कार्यअघि बढ्ने भएको छ । बाहिरी चक्रपथको यो खण्डमा त्रिभुवन, पृथ्वी, काठमाडौँ–तराई दु्रतमार्ग र काठमाडौँ–केरुङ मार्गसमेत जोडिने छ ।
यसअघि बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि गरिएका प्रयासमा यही खण्डमा विवाद आएकाले काम रोकिएको थियो । यही खण्ड निर्माणको सुनिश्चितता भएपछि बाहिरी चक्रपथ बन्ने पक्का भएको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय स्पष्ट नहुँदा बाहिरी चक्रपथको काम अघि बढ्न सकेन
काठमाडौँ । १३ वर्षदेखि चर्चामा रहेको बाहिरी चक्रपथको निर्माणको काम अघि बढन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका एक सय दिन पुग्ने दिनमै पहिलो चरणमा निर्माण हुने गरि गृहकार्य अघि
बाहिरी चक्रपथको पहिलो खण्ड विकास गर्न साढे छ अर्ब लगानी आवश्यक
काठमाडौँ । विगत १३ वर्षदेखि चर्चामा रहेको बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम औपचारिक रुपमा सुरु गर्नका लागि अझै केही समय कुर्नुपर्ने देखिएको छ । सबै तयारी पुरा भइसकेर पनि औपचारीक निर्माणको काम
बाहिरी चक्रपथका लागि जग्गा एकीकरण प्राधिकरणलाई अनुमति
काठमाडौँ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने सतुङ्गल क्षेत्रको ६ दशमलव ६ किमी क्षेत्रको जग्गा एकीकरण योजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । सरकारका प्रवक्ता
कहिले बन्छ बाहिरी चक्रपथ ? निर्माण प्रक्रियामा किन हुँदैछ ढिलाई ?
काठमाडौँ । राजनीतिक इच्छाशक्तिको शिकार हुँदै आएका विभिन्न विकासे पुर्वाधार आयोजनाहरु समयमै बन्न नसकेका तिता यथार्थहरु हामीमाझ छन् । तीन दशक पार गरिसक्दा पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण हुन नसक्नु,